पहिलो पल्ट नेपालमै बन्यो उ’त्कृष्ट बाइक, ७० रुपैंयाको चार्जले २०० कि.मि. दौडने (भिडियो सहित)
Homeसमाचारपहिलो पल्ट नेपालमै बन्यो उ’त्कृष्ट बाइक, ७० रुपैंयाको चार्जले २०० कि.मि. दौडने (भिडियो सहित)
March 11, 2021 admin समाचार 5630
पछिल्लो स’मय नेपाल पनि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रका अग्रसर बनिरहेको छ । नेपाली वैज्ञानिकहरु होस् या इन्जि’नियरहरु, आ आफ्नै तह तप्का’बाट जोड तोडका साथ लागि’रहेको तपाई हामीले देख्दै पढ्दै आएका छौ । त्यसो त पछिल्लो समय बिजुलीबाट चल्ने यात्री मोटरसाइकल सार्व’जानिक भएको छ, जुन नेपाली युवाहरुको टिमले बनाएका हुन् । अन्य मोटरसाइ’कलहरु भन्दा धेरै गुणहरुले फरक यात्री आखिर कसरी बन्यो अनि कस्तो बन्यो त ? यात्री चढ्नेहरुले कस्तो सुवि’धाहरु पाउने’छन् त ? यात्री नै किन चढ्ने त ?
हेर्नुहोस् यात्री मोटर’साईकलका फाउन्डर असिम पाण्डेसँग ग’रिएको अन्तरंग कुराकानी भिडियो हेर्नुहोस्:
यो पनि, ४ लाख ९ हजार मूल्य पर्ने एप्रि’लिया एसएक्सआर १६० नेपालमा पि’याजियो र एम.भी. दुगड गु्रपले एप्रिलिया एसएक्सआर १६० सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन अप्रिलिया नयाँ डिजाइन भाषा अन्तर्गत डिजाइन गरिएको पहिलो स्कूटर भए’को कम्पनीले जनाएको छ । स्कूटर नेपालको सबै डीलरशिपमा ४ लाख ९ हजार ९०० को आकर्षक प्रारम्भिक मूल्यमा उपल’ब्ध हुने बताइएको छ ।
यसबारे जा’नकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा पियाजियो इंडियाका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक डिएगो ग्राफी, वरिष्ठ उ’पाध्यक्ष सुधांशु अग्रवाल साथै एम.भी. दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, उपाध्यक्ष विवेक दुगड, भाइस प्रेसिडेन्ट विजय महतोको सहभा’गिता रहेको थियो ।
सो क्र’ममा डिएगो ग्राफीले भने, “हामी सबै ग्राहकहरुका लागि एप्रिलिया एसएक्सआर १६० लाई धेरै अपेक्षित प्रीमि’यम स्कूटरको रुपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी छौं। उत्कृष्ट शैली, उच्च प्रदर्शन र ठूलो विशेष’ताको प्रतीक यो विशेष गरी इटालीमा डिजाइन गरिएको हो, हामी विश्वास गर्छौं कि यस स्कूटरले नेपालको प्रीमियम टू–व्हीलर बजारमा उच्च मापद’ण्डहरू सेट गर्नेछ ।’
एम.भी. दुगड ग्रुपका उपा’ध्यक्ष दुगडले पियाजियो ग्रुपसँग साझेदार गर्दै विश्वस्तरीय भेस्पा र अप्रिलाका प्रीमियम उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको बताए । नेपालका लागि आधि’कारिक विक्रेता एम.भी. दुगड ग्रुपले टू व्हीलरमा अनुशासित ढंगले काम गर्न पाउँदा खुसी भएको पिया’जियो ग्रुपका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधांशु अग्रवालले बताए । यस्तै कम्पनीका उपाध्यक्ष विजय महतोले महामा’रीको बावजुद पनि आफूहरुले राम्रो गर्दै आ’इरहेका बताए ।
यो स्कु’टरमा नयाँ ग्लोबल डिजाइन भाषा समा’वेश हुनुका साथै एकल सिलिन्डर,४–स्ट्रोक, एयर–कूल्ड,३ भल्भ फीउल ईन्जेक्शन,कम कार्वन इमिसन ईन्जिन टेक्नोलोजी लगा’इएको छ । जसले ७१०० आरपीएममा ११ पीएसको पीक पावर उत्पादन गर्नुका साथै उत्तम सवारी अनुभव र उच्च स्तरको आ’राम प्रदान गर्न ठूलो, लामो, आरामदायी र एर्गोनोमिक सीटहरू रचना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । स्कूटर १२ भोल्ट, ५.० एएच. एमएफ ब्याट्रीको साथ र ७ लिटर इन्धन क्षमता’को साथ आने पनि बताइ’एको छ । – इताजा खबरबाट
पैसाले मात्र बचाउँन नसकिने रहेछ – मृ’त्यु सङ्ग ल’डिरहेका अभिषेक रहेनन् अब हामी माझ
June 8, 2021 admin समाचार 4594
बाग्लुङ जिल्ला बाग्लुङ नग’रपालिका १३ कालाखोला साविकको पैयुपाटा गा वि स वडानं ८ का’लाखोला निवासी वर्ष १८ का अभिषेक रोकाको आफ्नै गाउँमा घाँस का’ट्ने क्रममा रूख’बाट ल’डे’र टाउकोमा र’गत ज’मेको तथा अन्य अं’गहरु क्ष:तवि’क्षत भएको
April 13, 2021 admin समाचार 5346
नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । संचार’कर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागि आफूहरु एकसाथ रहेको ब’ताएका छन् । दर्शकले त तपाइ’हरुको जोडीलाई धेरै
अशोक दर्जी र समिक्षा अधिकारीको आवाजमा ‘मेरो छोरा सार्बजनिक’ , रातारात चर्चाको शिखरमा (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 23, 2021 admin समाचार 5484
पछिल्लो समयको सांगितिक ब’जारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परि’चर्चामा रहेको छ । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रो’ताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । कति गितहरुले त करोड क्लव प्रवेश गरि’सकेका छन् त